A anya na Jailbreak Tweaks na apple gburu iOS 9 beta
N'ihi na Apple, e nwere ike ịbụ ihe ọ bụla Fans si n'ebe na ike na-eche ruo mgbe ikpeazụ software a tọhapụrụ na ọha na eze. Otú ọ dị, e nwere ihe mere ndị mmadụ ka na-adịghị opted maka ewere iOS 9 beta? Ya adọkpụ na dangly ọdịdị e edebe ndị mmadụ pụọ na-ewere ya.
Nnukwu atụmatụ, Otú ọ dị ya ka odomo na-etinye aka na bụ jailbreak. Ndị arụnyere jailbreak ha iOS version na mgbe ahụ arụnyere ọhụrụ beta software ga-bụghị naanị ida ndị dị mkpa jailbreak kamakwa ga na-ekpe na-unjailbreakable ngwaọrụ. Ọ ga-esiri hackers nyak jailbreak ngwaọrụ nke dịnụ beta nsụgharị nke iOS software mmelite gaghịkwa Apple-enwe ike idozi vulnerabilities ma ọ bụ obere ọpụpụ ji site jailbreak ngwaọrụ na dị ka version. Ebe a bụ anya na Jailbreak Tweaks na apple gburu iOS 9 beta: -
a) Video ebi ndụ
Tupu na iOS, ndị mmadụ pụrụ tweak video software site multitasking na ị tube, iTunes, safari na ndị ọzọ na egwuregwu. I nwere ike na-ekiri vidio n'ebe ọ bụla na otutu windows-eji nke a jailbreak tweak. Otú ọ dị na iOS 9, Apple ka malitere a tweak site a ọhụrụ mma nke a maara dị Foto dị na Foto dị mode na iPad.
b) Search Ntọala
Nke a bụ ihe ọzọ na-ewu ewu jailbreak tweak. Ihe ọ na-agbakwụnye, a search igbe n'elu nke ọ bụla na ntọala ngwa. Apple dị nnọọ depụtaghachiri otu ihe ahụ ma na-etinye a yiri atụmatụ iOS 9. niile i nwere ime bụ nnọọ ẹkedori Ntọala ngwa si onwe gị n'ụlọ ihuenyo. Swipe ala ihuenyo na-search mmanya na top.
c) Swipe Nhọrọ
Na swipe nhọrọ, onye pụrụ ederede na iPad iji mmegharị na keyboard bugharịa cursor nakwa họrọ ederede. Apple si otú ugbu a kwukwara a mma ka iPad keyboard.
Na iOS 9, otu onye nwere ike ugbu a ịgbanwe chọrọ ikpe nke akwụkwọ ozi na onye software keyboard n'out oge mgbe Mgbanwe isi na-enwe, nke bụ kpọmkwem yiri ihe ngosi tweak eme
Na otu nke jailbreak Tweaks nke iOS 7 ka gbanwetụrụ na gbanwere ọbụna nke a na-gụnyere. The ngwa akpọ BattSaver nke bụ dakọtara na iOS 5, 6 na nke 7, bụ BattSaver tweak n'ezie na-enyere aka mmadụ abụọ batrị gị dị ndụ jailbroken iOS ngwaọrụ. E nwere ụfọdụ ndị ọhụrụ ike management atụmatụ na kwa a ọwọrọiso onye a bụ Low Ike Mode whih eruwo ọhụrụ na iOS 9. O si otú enyere gị aka ịgbatị ndụ batrị n'ihu.
Copic, obere ụdị maka Kpọtụrụ Foto dị, na-enyere na-egosi na kọntaktị photos nke bụ n'ebe nile gị iPhone, iPad ma ọ bụ ọbụna iPod. Ọ bụ otú yiri nnọọ ka iOS 9 beta na-egosi foto nke ndị na Ozi ngwa na ndị ọzọ niile na ngwaọrụ.
Apple nwere ụfọdụ nke ịtụnanya kere. Otu n'ime ha bụ splitview nke na-ahapụ gị multitask na abụọ ngwa n'otu oge. Nke a bụ ihe ReachApp doesnow site na-agbakwụnye gbawara n'etiti-ihuenyo. O si otú na-eji ngwaahịa apụghị iru ikike atụmatụ.
Nke a mew ụdị na ụdị jailbreak tweak-enye ohere otu kpamkpam ezipụta dị iche iche ngwa ọdịnala nke nwere ike igosi na elu n'oge dịgasị iche iche na dị iche iche ugboro nke ụbọchị na Control Center. Na iOS 9 Otú ọ dị, Apple ka ẹkenam a ọhụrụ mma nke na-ahapụ ndị mmadụ aka na-atụ aro ngwa ọdịnala na-igba egbe dabeere na onye ọrụ àgwà ọma.
i) Quick aza
Ndenye aza ngwa na-ahapụ gị zaa ndị mmadụ na ha chats enweghị ọbụna inwe nsogbu nke abanye ngwa. Otú ọ dị ọ na-adịghị soething ahụ bụ na-eju anya ọhụrụ. Ndị ọzọ jailbreak Tweaks dị ka
• IMN maka akara na Facebook ozi
• Ozi maka WhatsApp
• QuickReplier maka Viber nakwa na e-agbalị na-arụ ọrụ na nnwale.
N'ihi ya, ọ bụ ihe ihere na a na ngwaọrụ dị apple ga-egbu ọrụ enyi na enyi jailbreak Tweaks maka ndị mmadụ. Na ruo gradations na ndozi-eme, obere nwere ike kwuru ezie na.
Ebe a na-nghoputa ẹka ịchọ azịza nke ndị mmadụ na-ahụ ma ha ka ga jailbreak Ios9?
74% zara na nti ebe 26% nọgidere clueless, sị na ha ga-ahọrọ na-echere.
Ebe a bụ ohere maka unu na Fans nke iOS Fans inye na azịza gị ma jupụta na gị Ibọrọ. Gịnị ga-abụ gị aro? Ga na ị ka jailbreak iOS 9?
Pịnye Y maka ee, na N n'ihi na ọ dịghị. Biko eme zara ma ọ bụrụ na ị chọrọ inye a ịrịba ọsọ ọsọ ma ọ bụrụ na ị bụ onye na die- ike apple ofufe.
Otú nyefee Data si Motorola ka iOS Devices
Otú iziga Facebook ozi Ozi / foto / Videos on iOS
> Resource> iOS> A anya na Jailbreak Tweaks na apple gburu Ios9 beta